Madaxweynaha Turkiga Oo Si Kulul u Cambaareeyay Weerarka Istanbuul. - Wargeyska Faafiye
Madaxweynaha Turkiga Oo Si Kulul u Cambaareeyay Weerarka Istanbuul.
Ankara- Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ayaa si adag u cambaareeyay kooxaha Argagixisada ee ka dambeeyay weerar isqarxin ah oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha Ataruk ee magaalada Istanbul.
Recep Tayyip Erdogan, ayaa sheegay in dowladda Turkiga tacsi u direyso ehelada dadkii ku dhintay weearka, sidoo kalana alle uga baryay in uu dag dag u bogsiiyo kuwa ku dhaawacmay.
Madaxweynaha Turkiga ayaa xusay, in u jeedka Argagixisadu uu ahaa in ay laayaan dadka maatida ah ee aan waxba galabsan.
Erdogan, ayaa carabka ku adkeeyay in dowladdiisy ay dagaal adag la galeyso kooxaha argagixisada, ayna ku baacsan doonaan meel walba Argagixiso dunida kaga sugantahay, tan iyo inta caalamka oo dhan laga tirtirayo.
“Adduunka oo dhan hadii uusan dan ka laheyn la dagaallan argagixisada mid mid ayaan ula darireynaa argagixisada meel kasta oo ay adduunka ka joogaan”.ayuu yiri Erdogan.
31 ruux, ayaa ku naf weysay 147 kalana wey ku dhaawacmeen, Qaraxyada ka dhacay magaalada Istanbuul iyadoo Cisbitaalada magaalada la dhigay dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsBeelaha Hiiraan: Weli lama Heshiin Dowladda.Duqeyntii ka dhacday Kismaayo.Somali president hits back at U.N. graft charges.Xukuumadda Soomaaliya oo fidinaysa barnaamijka abaal-marinta lacageed ee macluumaadka ku saabsan al-Shabaab.Wafdi ka socda K/Afrika iyo Mozambique.